ဓာတ်တိုင်များ တင်ထားသည့် ကားကို ဆရာဝန် ၆ ဦးလိုက်ပါလာသည့် ကားမှ ဝင်တိုက်ရာ ၃ဦးသေဆုံးပြီး ၃ဦး ဒဏ်ရာရ ။
11/06/2019 mayoo 0
ဓာတ်တိုင်များ တင်ထားသည့် ကားကို ဆရာဝန် ၆ ဦးလိုက်ပါလာသည့် ကားမှ ဝင်တိုက်ရာ ၃ဦးသေဆုံးပြီး ၃ဦး ဒဏ်ရာရ ။ ဖျာပုံ-ကျိုက်လတ်-မအူပင် ကားလမ်း ပေါ်ရှိ ဖျာပုံမြို့၊ အမှတ် (၁၆)ရပ်ကွက် ဘက်ခြမ်း ချောင်းတွင်းတံတား ခြေဆင်းကွေ့တွင် ဇွန်လ (၁၁)ရက်နေ့ နံနက် ၃ Continuous reading
ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ အလှူတွေ လုပ်နေတဲ့ ပြေတီဦး
11/06/2019 lin htet 0
ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ အလှူတွေ လုပ်နေတဲ့ ပြေတီဦး သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦးက ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့အတူ အလှူလေးတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ ရုပ်ရှင်လောကသားတွေရဲ့ သားသမီးတွေ ကျောင်းအပ်တဲ့အခါမှာ အထောက်အပံ့လေး ဖြစ်အောင် ကျောင်းသုံးဗလာစာအုပ် (၃၀၀)လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် မြန်မာအမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းမှာ လည်း Continuous reading
“ကလေးခေါင်းတုံး ရိတ်ခြင်း စသည့် လွဲမှားနေသော အယူအဆ အမှားမျာကို ကလေးမိဘတိုင်းသိအောင်မျှပေးလိုက်ပါတယ် “
“ကလေးခေါင်းတုံး ရိတ်ခြင်း စသည့် လွဲမှားနေသော အယူအဆ အမှားမျာကို ကလေးမိဘတိုင်းသိအောင်မျှပေးလိုက်ပါတယ် “ ကလေးငယ်ရဲ့ ဦးရေပြားဟာ နုနယ်ပါတယ် ထိမိရှမိရင်တောင် ပိုးဝင်လွယ်ပါတယ် ပိုးဝင်ရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့ သေတတ်ပါတယ်။ မိမိရင်သွေးကို မသတ်မိပါစေနဲ့။ ခေါင်းတုံးရိတ်ခြင်းကြောင့် ဆံပင်ပိုသန်မလာပါ ဆံသားနုလေးများကြမ်းသွားတာပဲရှိပါတယ် ကလေးငယ်ဟာ မိဘမျိုးရိုးပေါ်မူတည်ပြီးဆံပင်ပါးတတ်ကြပါတယ် ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဆံသားကြမ်းလာပြီးသန်လာမှာပါ Continuous reading
ဘာသာစကား ခြောက်မျိုးလောက်အထိ တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အမွန်း ။
ဘာသာစကား ခြောက်မျိုးလောက်အထိ တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အမွန်း ။ နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင် တယောက်ဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် အမွန်းကိုတော့ တော်တော်များများလည်း သိထားကြမှာပါ။ အမွန်းကတော့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ လူငယ် တယောက်ဖြစ်သလို ထွက်လာတဲ့ သီချင်းတွေ MTV တွေ အားလုံးကလည်း လုံးဝကို အမိုက်စားပါပဲ။ သူ့အနေနဲ့ အဆိုတော် Continuous reading
မိန်းကလေးတိုင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာစတိုင်ကျ လှပနေစေဖို့ Pose ပေးနည်း ။ တစ်ခါတလေမှာ သာမန်မိန်းကလေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်ရော မဂ္ဂဇင်းကာဗာတွေထဲက မိန်းကလေးတွေလို လှပါ့မလားလို့ တွေးထင်ခဲ့ကြမှာပါ။ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစား ဖြစ်ပါစေ ဓာတ်ပုံထဲမှာလှနေဖို့၊ကောက်ကြောင်းပေါ်နေဖို့ ရိုရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိန်းကလေးတိုင်း ဓာတ်ပုံထဲမှာ စတိုင်ကျလှပနေစေဖို့ ဘယ်လိုpose ပေးရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ Continuous reading
11/06/2019 Yan Naing 0
မိန်းကလေး တွေရဲ့ လက်မောင်း မှာ အဆီပို တွေ မရှိဘဲ သွယ်လျ လှပ နေစေဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းကောင်းလေး တွေ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ ။ ခေါင်းပေါ် လက်မြှောက် ကွေးခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း အခု တစ်ခါ လေ့ကျင့်ခန်း ကတော့ ဘောလုံး( သို့ Continuous reading
နန်းမွေစံကတော့ “လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲ? ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ?” ဆိုပြီး မေးနေပြီ
နန်းမွေစံကတော့ “လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာဘာလဲ? ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘယ်မှာလဲ?” ဆိုပြီး မေးနေပြီ ဆရာဝန်မလေး နန်းမွေစံက Sexy Model တစ်ယောက်အဖြစ် အနုပညာလမ်းမမှာ နာမည်ကြီးသူ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုရိသကိုကိုတွေ စွဲမက်စေတဲ့ သူမရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှနဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ သူမရဲ့ ရုပ်ရည်ကြောင့် အားပေးသူ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရရှိထားသူလေးတစ်ယောက်ဆိုလည်း Continuous reading
ပုံမြင်တာနဲ့ အိပ်ငိုက်သွားစေမယ့် မွေ့ယာပုံစံအလန်းများ ။ ။
ပုံမြင်တာနဲ့ အိပ်ငိုက်သွားစေမယ့် မွေ့ယာပုံစံအလန်းများ ။ ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အလေးဆုံးက မျက်ခွံဖြစ်ပြီးတော့ ကုတင်က ရွှေနန်းဖြစ်ပါတယ်။အိစက်ညက်ညောတဲ့ မွေ့ရာကြီးတွေဟာ လူတွေကို အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး အရာထဲ ပါဝင်ပါတယ်။အိပ်မက်တွေ ကူပြောင်းသယ်ရာ ဗိမာန်နန်းလို နိုင်ငံတကာက မွေ့ရာ အဆန်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 .The hamburger bed Continuous reading
၁၂.၆.၂၀၁၉ မှ ၁၈.၆.၂၀၁၉အထိ ခုနစ်ရက်သားသမီးဗေဒင်ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အပြောင်းအလဲလုပ်လိုစိတ်များပေါ်မည်။ အလုပ်ပြောင်းချင်၊ အိမ်ပြောင်းချင်၊ နေရောင်ပြောင်းချင်စိတ်များဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပါသည်။ ထူးခြားမှုတစ်ခု မှာဘာသာရေးလုပ်လိုတဲ့စိတ်၊ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်လိုတဲ့စိတ်၊ သာသနာ့ဘောင်သို့ဝင်လိုသည့်စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါသည်။ အဓိဋ္ဌာန်တစ်ခုခုဝင်ဖြစ်အောင် ဝင် လိုက်ပါ။ အကောင်းများနှင့်ကြုံတွေ့လာရပါလိမ့်မည်။ မိမိကိုအကြံÓဏ်ကောင်းပေးမည့်သူ၊ အကူအညီကောင်းပေးမည့်သူပေါ်လာတတ်ပါသည်။ တိုးတက် ကောင်းမွန်သည့် အပြောင်းအလဲအချို့နှင့်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားခရီးဝေးသွားမည့်သူတို့သတင်းကောင်းကြားရတတ်ပါသည်။ ဘဝတိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်းအတွက် Continuous reading
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားက ဆယ်လီဇနီးမောင်နှံ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေ
လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားက ဆယ်လီဇနီးမောင်နှံ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေ အချစ်စစ်မှာ ဘယ်အရာမှ အတားအဆီးနဲ့ပိတ်ပင်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ အချစ်တစ်ခုကို ချစ်ကြတဲ့အချိန်မှာလည်း အပေါ်ယံအလှတရားတွေဟာ မလိုအပ်မှန်း နာမည်ကြီး ဆယ်လီစုံတွဲတချို့ကို ကြည့်ရင်း သိရှိနိုင်ပါတယ်နော်။ အပေါ်ယံအလှတရားတွေဟာ ခဏတာအတွက်သာ ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှု ၊ သစ္စာရှိမှုတွေကသာလျှင် ဘဝတစ်ခုကို Continuous reading